Shiinaha Customized shiraac boorsada weelka saarayaasha, shirkado, Warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsada gacanta Boorsada gacanta > Bacda tuwaalka
Bacda dharka sida ku cad isticmaalka maaddada haddii loo baahan yahay tolmo, waxaan u kala qaybin karnaa dharka dharka iyo maro aan tolmo lahayn.
1. Maxaan u aqbalayaa bacda taranka oo aan tolmo wanaagsan lahayn
Bacda dharka sida loo isticmaalo maaddada haddii loo baahdo tolmo, waxaan u qaybin karnaa dharka dharka iyo maro aan tolmo lahayn. Dharka dharka waxaa loo qaybiyaa maro dhirta dhirta, maro fiber kiimiko ah iyo maro isku dhafan; Xaashida badanaa waxaa sidoo kale loo yaqaan aan tolmo lahayn, Ingriisiga loo yaqaan 'Non Woven', waa nooc ka mid ah dharka aan tolnayn, wuxuu si toos ah u isticmaalayaa jajabka polymer, fiilooyin gaagaaban ama fiilo yar yar oo hawada hawada ah ama mashiinka gasha shabakadda, ka dibna loo marayo qodxanta biyaha, acupuncture, ama kulul lagu duubay oo la xoojiyay , ka dib markii la dhammeeyo sameynta dhammaadka, Dharka la xiray, oo leh jilicsanaan, neefsasho iyo qaab-dhismeedka diyaaradda ee noocyada noocyada cusub ee fiber-ka ah, faa'iidada ayaa ah in aan la soo saarin jajabka fiber, xoog leh, adkeysi leh, jilicsan sida xariir, laakiin sidoo kale dareenka suufka, marka la barbardhigo cudbi, bac aan tolmo wanaagsan lahayn, sameysmo fudud iyo raqiis. Qalabka ceeriin ee loo isticmaalo wax soo saarka wey ka duwan yihiin, waxaana loo qeybiyaa PP dhar aan tolmo lahayn iyo caag aan tolmo lahayn. PP waxaa loola jeedaa fiyuusta polypropylene, kuwaas oo ah polypropylene; PET waxaa loola jeedaa polyester, taas oo ah, polyetylen terephthalate, polyester maxaa yeelay qiimaha alaabta ceyriinka ah ayaa ka qaalisan PP, guud ahaan loo isticmaalo dhismaha biyuhu, iyo PP dhar aan tolmo lahayn.
3. Ma u baahanahay qiimeyn xagga deegaanka ah si aan u sameeyo shandad gacmeed?
Bacda tuwaalka itself is environmentally friendly, EIA or not is the same.
Waxaan sameynaa boorsooyin gacmeedyo badan oo shiraac ah ayaa loo dhoofiyaa Yurub, waxay qaataan tijaabooyin faraanti ah oo ay sameystaan, qiimeynta deegaanka.
5. Boorsooyinka xamuulka qaada iyo gaadiidka
Calaamadaha kulul: Bacda tuwaalka shiraaca, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka